Siyaqiniseka ukuthi, ngemva kokufunda isihloko lesi sihloko, abaqeqeshi kakhulu inja ngeke babuvume ngalezi zindaba okubhekiselwa kuzo. Iqiniso ukuthi ubudlova engenabulungisa isilwane ngu-97% ukusola umnikazi, oqeqeshwe kahle isilwane sakho. Akusiyo imfihlo ukuthi ngisho izinja ezincane zohlobo kungenzeka ongalawuleki nokubi. Kodwa lokhu akusho ukuthi kukhona inja killer. Nale akekho bangase baphikise. Yiqiniso, ngeke yokulimaza, kunokusebenza tilwane letinkhulu.
Okuchaza "elwa inja"?
Uma sihlaziya konke abezindaba bhala mayelana elwa izinja (okungukuthi, isikhundla sabo njengoba nababulali), khona-ke kubonakala sengathi sizungezwe ezinye izilo womele igazi, ababuzwa ubuhlungu, futhi ukudla kuphela inja ethangeni, amakati kanye nabantu. Kule ndaba, abathandi inja zahlukaniswa amakamu amabili. Abanye abanikazi ufisa ukuthi lezi "izilo" nqumela i Taboo okuphakade, abanye bezama ukufakazela ukuthi izinhlobo lokulwa - sinamandla, nesibindi izilwane womuntu ozinikele.
Duzane abaningi izinja elwa izinhlobo (pit bull terrier, Amstaff, Rottweiler nabanye) athandwa kakhulu, kukhona izinganekwane eziningi. Ngezinye izikhathi zingabantu akunasizathu. Ngaphezu kwalokho, yona kanye le nkulumo ethi "ukulwa inja" - inganekwane. Eqinisweni, lezi zilwane zihlukaniswe ehhovisi, zokuhlobisa nokuzingela. Ukulwa inja - okungukuthi, ngomqondo ongokomfanekiso, isihloko. It singasetshenziswa yisiphi zohlobo.
Akufanele sibakhohlwe ukuthi omkhulu okubi inja kanye bahileleke izimpi wezimpi ezalandela. It Caucasian umalusi inja, Alabai, Bulldog, isiJalimane inja, njll Kodwa namuhla, akekho uthi "kwabaMhlophe" - .. Ingabe inja killer. Eqinisweni, noma yisiphi isilwane kungaletha ukuze wayeyoba nolaka futhi iyingozi kubantu. Ngakho-ke, kunengqondo yini ukuthi iphoqelele izinhlobo ezithile? France zingabelana ngedatha nakho okunjalo. Uhulumeni ekuqaleni afakwe ohlwini ukwamukele 96 zilwane, kodwa kancane kancane ke lancipha 17. Khona-ke kwaba sobala ukuthi lena efile ekupheleni komgwaqo. inja Aggressive - kuwumphumela ngokungacabangi womuntu.
Ngezansi sethula nawe uhlu ayingozi kakhulu, ngokusho kongoti. Noma kunjalo, asikwazi ukusho ukuthi lokhu inja killer. Nge imfundo efanele umuntu onokwethenjelwa umsizi. Mhlawumbe abanye abafundi bethu uyoba umangale ukuthi ezinye izinja, okuyinto iningi abathandi animal cabanga izidalwa amnandi futhi ebukekayo, langena zethu phezulu encane inja killer. Siyazi ukuthi ixhunyiwe.
Elise-Asia Ephakathi uMalusi Inja
Lezi ziqhwaga enhle ngokuvamile okuthiwa Alabai, kodwa abona igama "Ihluzo" e Turkmenistan. Kuyinto uhlobo zemvelo. Umuntu akazange iqhaza ekuthuthukisweni yayo. Namandla futhi zinesibindi, lezi zilwane ziye uvuka indlobane ngenxa ukuzihlela nokuzivumelanisa kwemvelo. Zisetshenziswa bangafuni ukuvikela imfuyo ezilwaneni ezidla ezinye izilwane. uhlamvu isilwane omnene ngaphansi kwezimo ezinzima zezulu.
Lena isitha esesabekayo kakhulu, okuyinto eba ngejubane elikhulu phezu amafushane. Alabai ezinzima, wafunda enomqondo ukuchitha amandla. Namanje abaqotho kakhulu zohlobo yokuzalanisa akuvunyelwe. Isilwane akakwazi ziyakwenyanyisa isitha, asikwazi ngokuthi Ihluzo.
izihlathi Cute, uhlanganyela emphethweni isikhumba, eside uhlanganyela izindlebe - ngakho libukeka lokhu giant, okuyinto has endaweni yesine e simo sethu. Ukubheka lo ubuhle, kubonakala sengathi kukuhle ukhona, ethule futhi ngisho kancane ubuvila. Yebo, Umnikazi nomndeni wakhe kanye phyla kungaba umnene futhi unomusa. Kodwa akubahluphi bangaphandle.
lokhu inja angeke abamele abantu ongabazi. Uma uzama ongamazi "ukuxhumana" nalo, futhi kulapho kungaba pussycat ukugwavuma esongelayo. Misa, musa avivinye ukubekezela sesilwane, musa kungaholela enhlekeleleni. Uma umuntu onesibindi akazange yini usilalele leso sixwayiso, ngokushesha kulandele ukhonkolo kanye yalokho njengoba - kobukhulu isilinganiso yokulimala engxoxweni amateur ne inja. Ubani obangela kulesi simo?
Brasileiro, eqondiswa umuzwa wemvelo, ehlasela izindawo ezibalulekile, ngakho ukuqeqeshwa inja kumele kuqale zisencane. Ngaphezu kwalokho, umnikazi iyadingeka ukuze kuvinjelwe imizamo abangabazi bajwayelane isilwane sakhe.
Brasileiro ngolaka ivikela endlini umninindlu,, banikezwe lingakanani umxhwele, akungabazeki ukuthi kulula ukuthi aphumelele. Kwamanye amazwe, ungaba master Brasileiro kuphela ngemva imvume esikhishwe yinkantolo.
Nanku ummeleli isilinganiso sethu, oyingxenye eziningi imbangela ukudideka. Ingabe lezi ezimhlophe izidalwa cute nezimanakanaka - killer izinja? Phela, nabo basuke namanje amelwe imidwebo ngokunqoba kwamaGreki asendulo. Ngokuqinisekile abantu abaningi bacabanga ukuthi lena ubuhle kumnandi usejoyine inkampani izinja eziyingozi ngephutha.
Kodwa siyobona ukuthi kwakungeyona neze ingozi futhi akukho iphutha. LwaseDalmatia kudinga yokukhuliswa akhethekile esiqinile. Lezi zilwane badinga ukuqeqeshwa kanzima futhi eside. Inja namabala amnyama kufanele oqeqeshiwe kuphela abaqeqeshi professional, ukubuthela kubo nje akakwazi ukubhekana.
Abanikazi balezi zilwane kumele kukhunjulwe ukuthi lwaseDalmatia - okuzingela kunokuba inja zokuhlobisa. Noma yimuphi sicasulwa abangenacala ivela ingxenye yomuntu, kungaholela ekulimaleni okubucayi. Akusiyo imfihlo ukuthi lokhu kwenzeka kaningi impela. Lokhu inja luqinile futhi ezinzima, yena owa yengumzingeli omkhulu. Kungenxa yalesi sizathu, kungaba yingozi kubantu ongabazi.
Elinye icala lapho ukubukeka kwento. Lokhu degree (ngokubukeka) bear - akulona ithoyizi. Lesi silwane has a lot of nezinzuzo ezithile, kodwa nokho-ke akuwona wonke umuntu. inja Independent futhi akakude, agodliwe, okuyinto has a intando eqinile futhi ngokuvamile azikhukhumeze nenkani engenzi ivumelane umnikazi ongenalwazi.
Yena ngokungenabugovu enikelwe umndeni futhi ilungele lokuwuvikela. Umuntu oyiqonda ubunjalo Chow futhi umsebenzi sembuthanweni isilwane sakho, sikhule kakhulu nomngane othembekile futhi ukuthula. Uma kungenjalo, lokhu isilwane ungathola inja enolaka, nolaka futhi zingalawuleki.
I-American Pit Bull - inja-killer?
Kunzima ukuthola omunye zohlobo inja, angathathwa lidlule emhlabeni ezinganekwaneni eziningi kangaka njengoba Bull Terrier. Othile uthe enomusa isilwane ngophethe izinsana, umuntu siliqiniso umlindi esisemqoka futhi umuntu uqiniseka ukuthi lo mshini ukubulala, nabangenaluthando futhi olungenayo ukuzidabukela. Sonke kufanele kwamaphuzu ethu nezindaba ezibonakala zizinhle. Kodwa bonke ezahlukene ukuze kubonakala sengathi sikhuluma izilwane ezahlukene. Kuyini ngempela, lokhu inja enamandla futhi inamandla?
Okhokho balezi lezi izinja babe Staffordshire Terrier. Uma ubheka kubo, akungatshazwa: phambi kwakho - walilwela ngempela. Kuyinto inja enamandla enamandla imisipha athuthukiswe kahle, nomlomo okwe omkhulu, nemihlathi inamandla.
Lolu hlobo lithole idumela elibi ngawo-80, uma lezi zilwane nesibindi bebaqine ngokuya wafika zifanekisela ubugebengu. Lapha-ke sifika main - zizalela injongo yale zohlobo nesitimela. Bull Terrier akuyona okukhipha njengoba inja lokulwa, kodwa njengoba nanoma isiphi isilwane Qina, ume isibindi, kungashiwo wakhulela njengenhlangano enhle kakhulu unogada inja noma umbulali.
Okubi kakhulu kunakho konke, lapho imfundo le nja yethembekile eyingane futhi ngezinye izikhathi etotoswayo, ababesenethonya alien nomqondo zokuziphatha. Ngokuvamile kulesi simo, inja enjalo iba izindlela ukucacisa ngobudlelwane nontanga.
Nedressirovanny pit bull kungase ziyohlasela abantu. Emazweni amaningi, umuntu othenga inja enjalo kokuphula umthetho. Ngokusho kochwepheshe, American Pit Bull - inja esiyingozi kakhulu.
Kaninginingi, sifuna ukugcizelela ukuthi izinja eziyingozi kakhulu - umphumela imisebenzi abanikazi kokunganaki. Siyaqiniseka ukuthi iyiphi inja, kungakhathaliseki lokho ubukhulu, ubuntu kanye uhlamvu, kumelwe nakanjani kudlule lokho kuqeqeshwa. Kuyinto efiselekayo ukuthi umsebenzi kwenziwe ochwepheshe. Ukuze umuntu kungaba yingozi, yisiphi zohlobo, futhi umsebenzi wakhe omkhulu - ukuvikela abantu.
Amakhukhi Quick athokozise